Jimcaale iyo Jaamacaddii Beeshooda – Maandoon
September 28, 2017 Cabdullaahi Muuse 0 Comment
Jaamacadda ay Jimcaale reerkoodu leeyihiin, meel luuq ah oo ciriiriya ayay ku taal. Kulliyad adduun ka la ga dhigo oo aysan hayn ma jirto. Xitaa kuwa aan dunidaba la ga dhigan waa ay kuu dhigayaan. Kulliyad heblaayo waanu haynaa mooyee; waligood ba afkooda kama aysan soo bixin kulliyaddaa ma hayno. Sida dhabta ahna wax ay hayaan ma laha, iyaguse, waa wax walba hayayaal. Haddii la weyddiiyo nin ka fadhiya xafiis ka diiwaan galinta ardayda “Walaal, kulliyadda sixir barashada ma haysaa?” warcelintiisu waxaa weeye “Walaal mar ka hore soo dhawow, mar labaad iyo mar saddexaad na waxa aad ku mahadsantahay booqashada aad na soo booqatay, haddii aan faafaahin kaa siiyo kulliyadda sixir ka, walaal horta kulliyaddaan gabigeedaba sannad kaan ayaannu keennay, is qoriddeeduna waa ay socotaa. Hal kii fasal toddobaatan arday baa la ga rabaa, lixdan iyo siddeed waanu haynaa hadda, adiga iyo qof kale baa na ga dhimman.” …
Jimcaale isagu xafiis ka jaamacadda ayuu ka shaqaynayay beryahaan danbe, oo faylasha ardayda khaanadda ay ku jiraan buu maamulaa. Waa arday haddana maamul ka jaamacdda ayuu ka tirsan yahay! Dee waa jaamacaddoodii maxaad ka rabtaa? Waxba. Waa reer miyi hawl kar ah waana nin aammin ah, intaasaa na la gu doortay. …
Waa saddexdii saac ee barqannimo, waxa halkaan soo fadhiya waa ardaydii jaamacadda. Maanta ayay qalin-jebinayaan. Oo horta ha qalin-jebiyaane ma wax bay barteen? Maxaa hawshaa ku geliyay adiga, dibnahaaga ka adkow, soo xafladdii qalin-jebinta reer hebel ma joogtid. Cab shaaxaaga iyo sharaab kaaga, cun xalwadda iyo buskud ka, mar kii xafladdu dhammaatana kadinkaas ka bood. Yaa wax barta ma jaamacaddeenna baa wax lagu bartaa ma tiinna baa wax lagu bartaa, war ummadda islaameed hakaa ammaan hesho….
maqaalka oo PDF halkaan kaga boggo
Jimcaale iyo Jaamacaddii Beeshooda 2017 8 23
← Dhakafaarka Awra Amba: Barbaartu Laxooxda Ha Dubeen!
Maxaa Keenay in Sucuudigu Dumarka u Fasaxo Baabuur-wadista? →
November 30, 2018 Maxamed Cabdilaahi Comments Off on Macno-darrada sharka iyo masuuliyadda basharka